Lafta-gareen oo si dhaba u qaatay eedeymaha aabaha dhalay carruurtii lagu dilay Baydhabo | Dhacdo
Home Uncategorized Lafta-gareen oo si dhaba u qaatay eedeymaha aabaha dhalay carruurtii lagu dilay...
Lafta-gareen oo si dhaba u qaatay eedeymaha aabaha dhalay carruurtii lagu dilay Baydhabo
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen), Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa bilaabay inuu daba-galo waxa ka jira eedeymaha uu Sheekh Aweys Cabdullahi u jeediyay laamaha ammaanka ee Magaalada Baydhabo.
Sheekh Aweys Cabdullahi waa aabaha dhalay wiil iyo gabar ay da’doodu ka yar tahay 10 sano, kuwaa oo 7-dii bishii hore ee April laga qafaashay Magaalada Baydhabo, maalin ka dibna meydadkooda laga helay duleedka magaaladaasi.
Marka laga soo taggo in si xun carruurtaasi loo dilay ayaa waxaa haddana jira kufsi la sheegay in loo gaystay, sida ku cadba warqadda baaritaankii caafimaad, ee ay sameeyeen dhakhaatiirta ka hawlgasha Isbitaalka weyn ee Baydhabo.
Sheekh Aweys Cabdullahi oo la kulmay Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u sheegay in laamaha amniga ay gacan bidixeeyeen baaritaanka loo igmaday, waana xilli uu horaan Madaxweynuhu dembi baarista faray in sharciga la horkeeno ciddii carruurtaasi dishay.
“Fal dembiyeedkan lagu dilay, lagu xasuuqay, laguna shirqoolay ciyaalkii yar yaraa ee walaalaha ahaa inay sameysay haweeney oo keliya, oo la dhahay way sasabtay, waxayna geysay Bohol-galaay oo ay ku soo dishay, taas xaqiiqada iyo caqliga saliimka ah ee fiyow waa wax ka dheer.” Ayuu yiri Sheekh Aweys Cabdullahi oo Warbaahinta la hadlay.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Nin kasta oo raba in waxaasi uu shacabka ku qanciyo waa marin habaabin uu shacabka kaga marin habaabiyay jidka saxda ah iyo mid lagu fakinayo dembiileyaal ama eedeysaneyaal, oo haddii si sax ah loo baari lahaa, lagu heli lahaa inay dembiileyaal yihiin.”
Waxaa uu muujiyay inaanu ku qanacsanayn natiijada baaritaankii ay sameeyeen Saraakiisha dembi baarista ee Magaalada Baydhabo.
“Warbixinta ay laamaha ammaanka soo saareen waxay u gudbiyeen Madaxweynaha Koonfur Galbeed, aniga oo ah dhibanaha waxaan u sheegayaa inaanan warbixintaasi ku qanacsanayn.” Ayuu yiri Sheekh Aweys Cabdullahi.
Sidoo kale waxaa uu ka dhawaajiyay in Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu la wadaagay cabashada uu ka yahay natiijada laga soo saaray baaritaankaasi.
“Madaxweynaha markii aan warbixintaasi aan isla fallanqeynay wuxuu garwaaqsaday in warbixinta ay dulduleelo leedahay. Anagoo isla fadhino ayaa laamaha baaritaanka oo Taliska Booliska ugu horeeyo loo yeeray, wuxuuna Madaxweynaha ku dhahay ku noqda baaritaankaasi.” Ayuu yiri Sheekha.
Sheekha oo ka hadlayay arrinta shakiga ku dhalisay ayaa yiri “Caqli gal miyaa in kiis kufsi la qariyo, laamaha dembi baarista kuligood way qariyeen, wayna ka wada siman yihiin, cid gooni loogu eedeynayo malahan. Kufsigaasi waxaa caddeeyay oo kashifay, bannaankana soo dhigay Isbitaal Goboleedka Magalaada Baydhabo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed-na anigaa gacanta ka saaray, weliba markii aan gacanta ka saarayay waxaan ku dhahay laamaha dembi baarista makuu sheegeen in kufsi jiro? Maya ayuu igu dhahay.”
Waxa kaloo uu yiri “Qoladii dembi baarista kufsiba kuma darin warbixinta, kufsi inuu jiraba warbixinta kumaba darin, marka yaa kufsaday carruurta, haddii gabar keligeed ay waxaan oo dhan sameysay?”
Haweeneyda ay laamaha ammaanka falkan u hayaan waa afada Sheekh Aweys Cabdullaahi, taasoo ay sheegeen in la arkay iyadoo carruurta kaxeynaysa, maalintii ugu dambeysay ee la weynayay.
Dhanka kale Xafiiska Madaxweynaha ayaa Maamulka Isbitaalka Baydhabo ka xaqiijiyay jiritaanka kufsigaasi.
Madaxweyne Lafta-gareen oo siyaabooyin kala duwan ula kulmay Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa u sheegay inuu ka doonayo cidda dhabta ahi ee falkaasi gaysatay.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa gelinkii dambe ee Axaddii shalay la kulmay Waaxda Garsoorka ee Koonfur Galbeed, oo uu kala hadlay arrimo kala duwan.
Kulanka oo ay ka qaybgaleen Wasiir Kuxigeenka Cadaaladda ee Koonfur Galbeed, Cabdiwahaab Cabdullaahi Maxamuud iyo Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Koonfur Galbeed, Axmed Cali Muuse ayuu Madaxweynuhu ku soo hadalqaaday, sida ay lagama maarmaan ugu tahay in Sheekh Aweys Cabdullaahi oo ka mid ah Culima’udiinka Magaalada Baydhabo uu helo cadaaladda uu maamulka ka doonayo.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa musuq maasuq iyo wax isdab-marin ku eedeeya hay’adaha dembi baarista iyo maxkamadaha ku yaala dhulka ay maamulaan Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, waana taa midda keentay inay u cadaalad doontaan dhulka uu maamulo Shabaabka caadeystay daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed.
Previous articleRooble oo sheegay in la fududeynayo wada shaqaynta Saxafiyiinta, xilligan muhiimka
Next articleFarmaajo oo warqadaha ka guddoomay Safiirka cusub ee Itoobiya (SAWIRRO)